#Madagascar : Fitaterana an-drenivohitra. Ho 400 ariary ny saran-dàlana, tsy hisy intsony ny tapa-dàlana | ONG Lalana Blog
#Madagascar : Fitaterana an-drenivohitra. Ho 400 ariary ny saran-dàlana, tsy hisy intsony ny tapa-dàlana
Hiakatra ny saran-dàlana Hanaraka izany ve ny kalitaon’ny fitaterana
Hiakatra ho 400 ariary manomboka amin’ny voalohan’ny volana novambra ny saran-dàlana amin’ireo taksibe ary tsy hisy intsony ny fandraisana saran-tapa-dàlana.
Fanapahan-kevitra henjana. Efa nanom- boka nipetaka tamin’ireo taksibe maro miasa eto an-drenivohitra omaly ny taratasy fampahafantarana ny fiakaran’ny saran-dàlana ho 400 ariary manomboka amin’ny voalohan’ny volana novambra ho avy izao. Izany no hevitra tapaka tamin’ny fivoriam-ben’ireo kaoperativa 58 miasa eto an-drenivohitra izay notontosaina afak’omaly.
« Tena tsy zakan’ny mpitatitra intsony ny fiakaran’ny solika ka sarotra aminay ny hanome fahafaham-po feno an’ireo mpanjifa. Nidina ambany dia ambany ny vola miditra aminay, hany ka ratsy sy tsy voakojakoja in-tsony ireo fitaovam-pitateram-bahoaka ampiasainay. Toky anefa no omenay ny mpanjifa fa hane-tsika ireo mpiantsehatra rehetra eo amin’ny lafin’ny fitaterana mba hanome fahafaham-po azy ireo sy mba hahafahanay miarina amin’izao vesatra mianjady aminay izao izahay », hoy ny fanazavana nomen’An­dria­mbinin­tsolomora Bernardin, filohan’ny vondron’ny kaoperativa miasa an-drenivohitra, na ny UCTU. « Tazonina ho tokana ny saran-dàlana fa tsy hisy intsony ny tapa-dàlana. Mba tsy hampidangana ny saran-dàlana hihoatra ny 400 ariary no anton’ izany », hoy hatrany ity tompon’andraikitra ity.
Mpanjifa mitaky fepetra
« Rariny ireo mpitatitra ireo raha hampakatra saran-dalana satria efa tapitra mihamiakatra avokoa izao ny sara sy ny vidin-javatra rehetra. Tsy tokony hofoanan’izy ireo anefa ny saran-dalana tapa-dàlana fa tokony hapetraka ihany », raha ny voalazan-dRafeno­manantsoa Hovala­laina, renim-pianakaviana monina etsy Andravoahangy. « Rehefa hampakatra saran-dàlana ireo mpitatitra ireo dia tokony haneho fanajana ny mpandeha izay mamelona azy amin’ny lafin’ny rehetra », hoy kosa Rabakoarivelo Didier, raim-pianakaviana.
« Efa manana karatra tsirairay avy ireo mpamily sy mpanampy azy isaky ny fiara. Raha misy ny tsy fanarahan-dalàna ataon’izy ireo dia sintonina avy hatrany io karatra io ary tsy hahazo hiasa eo amin’ ny sehatry ny fitateram-bahoaka intsony izy. Tsy tokony hiala ao anaty fiara manoloana izany ireo mpanjifa raha tsy efa tonga any amin’ny toeram-piantsonana faran’ilay fiara mitondra azy. Raha misy ny herisetra ataon’ireo mpitatitra amin’ireo mpanjifa dia ny miantso ny laharana finday 032 05 139 99 ho an’ny zotra an-drenivohitra sy ny 032 02 594 18 ho an’ny zotra miasa ivelan’ny renivohitra no tokony hatao, handraisana fepetra », raha ny nambaran’ny filohan’ny UCTU, Andriambinin­tsolomora Bernardin ihany.